Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights on the 70th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights
လွန်ခဲ့တဲ့ မတ်လ (၂၁) ရက်နေ့က ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီမှာ အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းခဲ့တဲ့ လူ့အခွင့်အရေး မဟာမင်းကြီး Michelle Bachelet က မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပြိုလဲပျက်စီးမယ့် အန္တရာယ်ပိုများလာတယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်။ သူရဲ့ ပြောကြားချက်ဟာ တကယ့်လက်တွေ့ အခြေအနေနဲ့ ဘယ်လောက် ကိုက်ညီပါသလဲ။ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ နေထိုင်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူ ဦးရဲထွန်း နဲ့ ဦးကျော်ဇံသာ ဆွေးနွေးသုံးသပ်ထားပါတယ်။
မေး ။ ။ မနေ့တနေ့ကပဲ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးမဟာမင်းကြီး Michelle Bachelet က မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းတဲ့နေရာမှာ အခုလို ပြောသွားပါတယ်။ "Myanmar is increasingly at risk of state collapse, with shattered economic, education, health, and social protection systems." မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပြိုလဲပျက်ဆီးမည့် အခြေအနေနဲ့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နီးကပ်လာနေပြီလို့ ပြောသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှု့ကာကွယ်ရေးစနစ် စတာတွေဟာ ချွတ်ခြုံကျသွားပြီဆိုတာကိုလည်း ပြောထားပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဦးရဲထွန်းနဲ့ ကျနော် ဆွေးနွေးလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးရဲထွန်းက မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ နေပြီးတော့ နိုင်ငံရေး သုံးသပ်နေသူဆိုတော့ ဒီအခြေအနေဟာ ဘယ်လောက်မှန်ကန်သလဲဆိုတာကို စပြီးကြည့်ကြရအောင်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပြိုပျက်လုနီးပါးအခြေအနေနဲ့ ဆိုက်နေပြီဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား။
ဖြေ ။ ။ သူ့အစီရင်ခံစာထဲမှာက မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဒီလာမယ့်နှစ်တွေမှာဆိုရင် (၅၅) သန်းလောက်ရှိတဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့  တဝက်လောက်က ဆင်းရဲတွင်းမျဉ်းအောက်လောက် ရောက်သွားမယ်။ ဆင်းရဲတဲ့လူတွေ ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို သတိထားမိတယ်။ အဲဒါတော့ နည်းနည်းနီးစပ်တာပေါ့။ တော်တော်များများတော့ အခုအခါမှာတော့ အလုပ်တွေအကိုင်တွေ ပျောက်သွားကြတယ်။ အလုပ်အကိုင် မရှိကြဘူး။ နောက် လုပ်လို့ကိုင်လို့လည်း အဆင်မပြေဘူး။ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်လည်း CDM လုပ်ရမှာလား။ CDM မလုပ်ရမှာလား။ မလုပ်ဘဲနဲ့ နေပြန်တော့လည်း တခါ အသက်အန္တရာယ်၊ ရန်ရှာတာခံရ စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး။ ပြောချင်တာက ဘယ်အလုပ်အကိုင်မှ အဆင်မပြေကြဘူးပေါ့။ ဒါကတချက်။ နောက်တခုက နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေလည်း ထွက်သွားကြတာတွေ ရှိတဲ့အခါကြတော့ မျှော်လင့်ထားတဲ့ တရုတ်ပြည်က ကုမ္ပဏီတွေလည်း ဝင်မလာကြဘူးပေါ့။ အဲဒီလိုဆိုတော့ ဒီဟာကတော့ မှန်သင့်သလောက် မှန်ပါတယ်။
နောက် ပြိုပျက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စကတော့ အာဏာကို ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်း - အခုကတော့ တပ်မတော်ပေါ့။ တပ်မတော်က ပြိုကွဲသွားမလားဆိုတဲ့ပေါ် မူတည်တာပေါ့။ အခုလောလောဆယ် အနေအထားကတော့ အဲဒီလို တပ်မတော်ပြိုကွဲသွားနိုင်တဲ့ အနေအထားကတော့ မရှိသေးဘူး။ သူကို ဝိုင်းတိုက်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ စာရင်းအရ ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ အများကြီးပေါ့။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အသီးသီးက စာရွက်ပေါ်မှာ ကြည့်လိုက်ရင်တော့ အများကြီး။ လက်တွေ့မှာတော့ အဲဒီအဖွဲ့တွေအားလုံးကလဲ စုစုစည်းစည်း ညီညီညွှတ်ညွှတ်နဲ့ ဝိုင်းတိုက်နေကြတာ မဟုတ်ဘူး။ တချို့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေက တပ်မတော်နဲ့ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲ မဖြစ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေလည်း ရှိတယ်။ အဓိကအားဖြင့်တော့ UWSA အဲဒီလို အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ AA တို့လို အဖွဲ့အစည်းတွေက အခုအချိန်မှာဆိုရင် တပ်မတော်နဲ့ လုံးဝတိုက်ပွဲ မဖြစ်ဘူး။ ဆိုတော့ သူ့အတွင်းပိုင်းမှာလဲ ပြိုကွဲမယ့်သတင်းကိုတော့ အခုထိတော့ မတွေ့ရသေးဘူး။ အကြီးမာဆုံး အန္တရာယ်ကတော့ တပ်မတော်ထဲကပဲ လာမှာဖြစ်တာပေါ့။
မေး ။ ။ ဒါပေမဲ့ ဒီနေရာမှာ တချို့ တိုင်းရင်းသားတွေ၊ တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေက သူတို့တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ သူတို့ လိုချင်တဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ဖယ်ဒရယ်ပုံစံမျိုး မရဘူးဆိုရင် ဆိုပြီးတော့ ဒီထက်ပိုပြီးတော့ ချဲ့ ထွင်စဉ်းစားလာကြတာတွေ ရှိနေကြပါတယ်။ ဆိုတော့ ဒီအခြေအနေကရော ပြည်ထောင်စုကို တစုတစည်းတည်း မပြိုမကွဲအောင် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မယ့် အခြေအနေ ရှိရဲ့ လား။ အဲဒါကိုလဲ ဒီနေရာမှာ ကျနော်တို့ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ် ထင်ပါတယ်။
ဖြေ ။ ။ ဒီဟာနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ အခု တိုင်းရင်းသားတွေ မျှော်လင့်စရာက NUG, CRPH က ဦးဆောင်ပြီး ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ NUG က သူတို့ကို ဖိတ်ခေါ်တယ်၊ သူတို့နဲ့ စကားပြောပြီးတော့ အစိုးရလည်း ဖွဲ့ထားတယ်။ အဲဒီမှာ သူတို့က ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပေးမယ်လို့ ပြောတယ်။ သို့သော်လဲ အခုထက်ထိ အနာဂတ်အခြေခံဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ တူညီတဲ့ ဆွေးနွေးချက်တွေ ထွက်မလာသေးဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဟိုတခါ ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသလိုပဲ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို NLD က ပေးမယ်ဆိုတာက ဘယ်လောက်စိတ်ချရသလဲ။ ဘယ်လောက် သူတို့ နားလည်သလဲဆိုတဲ့ပေါ်မှာ သူတို့လည်း သံသယ ရှိကြလို့ ရွေးရခက်နေတဲ့ပုံ ပေါ်ပါတယ်။ တပ်မတော်အနေနဲ့လဲ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို အခုအခါက သူတို့က လက်ခံတယ်။ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ သွားမယ်လို့လဲ သူတို့က ပြောထားတယ်။ ဆိုတဲ့အခါကြတော့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့က အထူးသဖြင့်တော့ ဟိုတနေ့က ပြောလိုက်တာ AA ပေါ့။ ဒီလို တိုင်းရင်းသားတွေ တောင်းဆိုတဲ့ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို ပီပီပြင်ပြင် မရရင်၊ ကျနော်တို့ဘာသာ ကျနော်တို့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် နိုင်ငံခြားအကူအညီနဲ့ သွားရလိမ့်မယ်လို့ သူပြောလိုက်တာ ရှိတယ်။ အဓိကပြောချင်တဲ့ သဘောကတော့ ဖက်ဒရယ်စနစ် မရလို့ရှိရင် ခွဲထွက်ဆိုတဲ့ အဲဒီလိုမျိုးသဘော ပြောလိုက်တာမျိုး ရှိတယ်။ ဒါကလဲ ကျနော် ခန့်မှန်းကြည့်တာတော့ တကယ် ခွဲထွက်ဖို့ ရည်ရွယ်တာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ဖိအားပေးတယ်လို့ပဲ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ခြိမ်းခြောက်တာ၊ ဖိအားပေးတာ။ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံရေးသမားတွေ NLD အပါအဝင် နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေကို ဖိအားပေးပြီး၊ သတိပေးလိုက်တဲ့သဘောလို့ မြင်ပါတယ်။
မေး ။ ။ ဆိုတော့ နောက် ကျနော်မေးချင်တာက Michelle Bachelet ပြောတဲ့အထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့  လုံခြုံရေး၊ နောက်ပြီးတော့ စီးပွားရေးတော့ ပြောပြီးပြီ။ လုံခြုံရေးနဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်စတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေကော ဘယ်လောက်အထိ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဖြစ်နေပြီး၊ ပြန်ပြီးတော့ကော အဖတ်ဆယ်လာနိုင်တဲ့ အခြေအနေ အခုလောလောဆယ်မှာ ရှိလာနိုင်ပါသလား။
ဖြေ ။ ။ အခုလောလောဆယ်မှာတော့ မရှိနိုင်သေးဘူး။ အခုလောလောဆယ်မှာတော့ ဘယ်ဘက်မှ မပါဘူး။ လက်ရှိ နစကကိုလည်း ပုတ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာ၊ တော်လှန်တာ မလုပ်ဘူး။ NUG ကိုလည်း ပုတ်ခတ်ဝေဖန်တာ မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် အထူးသဖြင့်တော့ နိုင်ငံရေးအရ ဘာမှသိပ်မပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဒီပြဿနာ မရှိဘူး။ သို့သော် အဲဒီလို တဘက်ဘက်ကရပ်ပြီးတော့ နေတဲ့လူက ဘယ်ဘက်မှာပဲနေနေ သိပ်တော့မလုံခြုံဘူး။ အခုမြို့ ပေါ်မှာ အခြေအနေကတော့။ တကယ်လို့ နစကကို ပုတ်ခတ်ဝေဖန်ပြီး တိုက်ခိုက်နေရင်လဲ အချိန်မရွေး လာပြီးတော့ ဖမ်းသွားနိုင်တာပေါ့။ NUG, PDF တွေကို ပုတ်ခတ်ဝေဖန်ပြီးတော့၊ အထူးသဖြင့်တော့ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ ရေးနေလို့ရှိရင်တော့ အဲဒီလူလည်း ဘယ်နေ့ချောင်းပြီးတော့ အပစ်ခံရမယ်ဆိုတဲ့ အန္တရာယ် ရှိနေတာပေါ့။ ဒါတွေကတော့ ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ လူ့အခွင့်အရေး ဆိတ်သုဉ်းတာပေါ့။ အဲဒီလို အနေအထားကတော့ တကယ်တည်ရှိနေပါတယ်။
မေး ။ ။ ဆိုတော့ စီးပွားရေး ပြောပြီးပြီ။ လုံခြုံရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောပိုင်ခွင့် မရှိဘူး။ အကုန်ကြောက်နေရတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စ။ နောက် ကျနော်ဆက်ပြီးတော့ နည်းနည်းမေးလိုက်ချင်သေးတာက စီးပွားရေးအပြင် လူမှုရေးဆိုတာ လူတွေရဲ့  ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးကိစ္စတွေကိုလည်း နည်းနည်းပြောပါအုံး။
ဖြေ ။ ။ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးကိစ္စတွေကလည်း အခုနပြောသလို အစိုးရက ဝန်ထမ်းတွေပေါ်မှာ ကောင်းကောင်မထိန်းချုပ်နိုင်သေးတဲ့အခါကြတော့ CDM လုပ်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေလည်း CDM လုပ်ကြတယ်။ ထွက်သွားကြတယ်။ နောက်တခါ ပညာရေးကိစ္စမှာလဲ ဆရာမတွေက CDM လုပ်လို့ရှိရင်လဲ သူတို့မှာ စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲ ရှိတယ်။ တခါ မလုပ်ပြန်လို့ရှိရင်လဲ ရန်ရှာခံရတာပေါ့။ အဲဒီလိုဆိုတော့ နှစ်ဘက်စလုံးကို ကြောက်နေရတော့ စာသင်ရတာ၊ သူတို့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့အခါမှာလဲ တထိတ်တလန့််နဲ့ သိပ်ပြီးတော့ စိတ်ရောကိုယ်ပါ တာဝန်မထမ်းဆောင်နိုင်ဘူး။ ဒါ့အပြင် အခု ကျောင်းသားတွေကို စာမေးပွဲဖြေခွင့်ပေးပြုတဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အချင်းပွား အငြင်းပွားမှုတွေ ပေါ်နေတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အခါကြတော့ ပြောချင်တာက ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးကဏ္ဍတွေမှာ ထိခိုက်နေတာပေါ့။ ကျနော်တို့ ဆေးရုံတွေမှာဆိုရင်လဲ သိသလောက်တော့ ပြည်သူ့ဆေးရုံတွေ၊ အစိုးရဆေးရုံတွေ သွားလို့ရှိရင် သိပ်ပြီးတော့ ဝန်ဆောင်မှု မရဘူး။ အဲဒီလိုအနေအထားမျိုးတွေ ရှိနေတယ်။ ဆိုတော့ ခြုံပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီကဏ္ဍတွေမှာဆိုရင်လဲ အရင်ကထက်စာရင်တော့ အများကြီး ဆုတ်ယုတ်တယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
မေး ။ ။ ဆိုတော့ တိုင်းပြည်မပြိုပျက်နိုင်ဘူးလို့သာ ပြောရတယ်၊ ကောင်းတာလဲ တခုမှ မရှိပါလား။
ဖြေ ။ ။ အခြေအနေကတော့ အဲဒီလို ဖြစ်နေတော့ မျှော်လင့်စရာကတော့ လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲ - သူတို့လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါတီကြီးတွေဖြစ်တဲ့ NLD, SNLD တို့ စသည်ဖြင့် အဲဒီလို နိုင်ငံရေးပါတီကြီးတွေ ပါမလား။ ပါလာအောင် စည်းရုံးနိုင်မလားဆိုတဲ့ပေါ်မှာလဲ အများကြီးတည်တာပေါ့။ အဲဒီပါတီတွေက သပိတ်မှောက်နေမယ်၊ သူတုို့မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင် အဲဒီရွေးကောက်ပွဲက ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အစိုးရကလည်း သိပ်ပြီးတော့ သြဇာရှိမယ့်ပုံ မပေါ်ဘူး။ နိုင်ငံတကာကလဲ ဒီလိုပဲ sanction တွေ ဘာတွေ ဆက်ရှိနေမှာပေါ့။ အထူးသဖြင့်တော့ အနောက်အုပ်စုကပေါ့။ ပြည်တွင်းမှာတော့ သိပ်ပြီးတော့ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း မရှိဘူး။ တည်ငြိမ်မှု မရှိလို့ရှိရင်တော့ နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ။ အထူးသဖြင့်တော့ သူတိုိ့အားကိုးတဲ့ တရုတ်ကလည်း လာဝယ်စရာ၊ လုပ်ကိုင်စရာ မရှိဘူး။ ဆိုတော့ တဖြည်းဖြည်းချင်းမှာ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခကို နိုင်အောင် တိုက်နိုင်ရင်တော့ အစိုးရက နိုင်အောင်တိုက်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ အခြေအနေက တဖြည်းဖြည်း အပြောင်းအလဲ ဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့။
မေး ။ ။ ဆိုတော့ တိုက်နိုင်မနိုင်တာကို စောင့်ကြည့်ရမယ့် အခြေအနေပေါ့။ လောလောဆယ်မှာ အာဆီယံကလည်း အထူးကိုယ်စားလှယ် လာပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံအရေးမှာ ကြားဝင်စေ့စပ်ပေးဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ နောက် ဂျပန်က ဆာဆာကာဝါကလည်း ဒီကိစ္စမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ် ဘာညာပြောနေတယ်။ ဆိုတော့ သူတို့တွေရဲ့  အခန်းကဏ္ဍကော ဘယ်လောက် အရေးကြီးမယ်၊ ဘယ်လောက်အထိ ထိရောက်မှု ရှိမယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ အခုလာတဲ့အခါကြတော့ သူတို့ ဘုံသဘောတူညီမှု (၅) ချက် - အဲဒါကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့အတွက် သူတို့က အဓိကလာပြောတာ ဖြစ်တယ်။ နစကဘက်ကတော့ သူတို့ပြောနေကြအတိုိင်း ဘာကြောင့် အာဏာထိန်းရသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပဲ ပြန်ရှင်းပြတယ်။ ရှင်းပြပြီးတော့ ဒီတခေါက်တော့ ထူးထူးခြားခြား ပြောတာက ဘုံသဘောတူညီချက် (၅) ချက်ကို သဘောတူတယ်။ ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်မယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာအစိုးရက ဦးဆောင်တဲ့ ဖော်ဆောင်မှုပဲ ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာမျိုး ပြောလိုက်တာကို သတိထားမိတယ်။ ဆိုလိုချင်တာက အားလုံးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ ဒီဆွေးနွေးရေးကိစ္စတွေ ဘာတွေက ဥပဒေကြောင်းအရ ပါဝင်ခွင့်မရှိတဲ့ သူတွေကို ပေးမပါနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကို ထပ်လောင်းပြီးတော့ ပြောလိုက်တဲ့သဘော။ ဒီမှာတော့ အာဆီယံအသင်းဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ ယူဆချက်နဲ့ ကွာသွားပြီ။ အာဆီယံအသင်းဝင် နိုင်ငံတွေကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးဝင်းမြင့်တို့ အပါအဝင် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။ ဒီဥစ္စာကလဲ ကမ္ဘောဒီးယားက ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ ဒီအတိုင်း ဆက်သွားနိုင်ပေမယ့် ကမ္ဘောဒီးယား ဥက္ကဋ္ဌ မဟုတ်တော့ဘဲ၊ အင်ဒိုနီးရှားအလှည့် ရောက်သွားလို့ရှိရင် တခါပြန်ပြီးတော့ ရပ်သွားပြီး၊ နဂိုမူလအတိုင်း ပြန်ပြီးတော့ အခြေအနေ ပြန်ဆိုးသွားနိုင်တယ်။
လှနျခဲ့တဲ့ မတျလ (၂၁) ရကျနကေ့ ကုလသမဂ်ဂ လူ့အခှငျ့အရေးကောငျစီမှာ အစီရငျခံစာ တငျသှငျးခဲ့တဲ့ လူ့အခှငျ့အရေး မဟာမငျးကွီး Michelle Bachelet က မွနျမာနိုငျငံဟာ ပွိုလဲပကျြစီးမယျ့ အန်တရာယျပိုမြားလာတယျလို့ ပွောသှားပါတယျ။ သူရဲ့ ပွောကွားခကျြဟာ တကယျ့လကျတှေ့ အခွအေနနေဲ့ ဘယျလောကျ ကိုကျညီပါသလဲ။ မွနျမာပွညျတှငျးမှာ နထေိုငျနတေဲ့ နိုငျငံရေးသုံးသပျသူ ဦးရဲထှနျး နဲ့ ဦးကြျောဇံသာ ဆှေးနှေးသုံးသပျထားပါတယျ။
မေး ။ ။ မနတေ့နကေ့ပဲ ကုလသမဂ်ဂရဲ့ လူ့အခှငျ့အရေးမဟာမငျးကွီး Michelle Bachelet က မွနျမာနိုငျငံနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ အစီရငျခံစာ တငျသှငျးတဲ့နရောမှာ အခုလို ပွောသှားပါတယျ။ "Myanmar is increasingly at risk of state collapse, with shattered economic, education, health, and social protection systems." မွနျမာနိုငျငံဟာ ပွိုလဲပကျြဆီးမညျ့ အခွအေနနေဲ့ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ နီးကပျလာနပွေီလို့ ပွောသှားတာ ဖွဈပါတယျ။ စီးပှားရေး၊ ပညာရေး၊ ကနျြးမာရေး၊ လူမှု့ကာကှယျရေးစနဈ စတာတှဟော ခြှတျခွုံကသြှားပွီဆိုတာကိုလညျး ပွောထားပါတယျ။ ဒီကိစ်စနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ ဦးရဲထှနျးနဲ့ ကနြျော ဆှေးနှေးလိုတာ ဖွဈပါတယျ။ ဦးရဲထှနျးက မွနျမာနိုငျငံထဲမှာ နပွေီးတော့ နိုငျငံရေး သုံးသပျနသေူဆိုတော့ ဒီအခွအေနဟော ဘယျလောကျမှနျကနျသလဲဆိုတာကို စပွီးကွညျ့ကွရအောငျပါ။ မွနျမာနိုငျငံဟာ ပွိုပကျြလုနီးပါးအခွအေနနေဲ့ ဆိုကျနပွေီဆိုတာ ဟုတျပါသလား။
ဖွေ ။ ။ သူ့အစီရငျခံစာထဲမှာက မွနျမာနိုငျငံဟာ ဒီလာမယျ့နှဈတှမှောဆိုရငျ (၅၅) သနျးလောကျရှိတဲ့ ပွညျသူလူထုရဲ့ တဝကျလောကျက ဆငျးရဲတှငျးမဉျြးအောကျလောကျ ရောကျသှားမယျ။ ဆငျးရဲတဲ့လူတှေ ဖွဈသှားမယျဆိုတဲ့အခကျြကို သတိထားမိတယျ။ အဲဒါတော့ နညျးနညျးနီးစပျတာပေါ့။ တျောတျောမြားမြားတော့ အခုအခါမှာတော့ အလုပျတှအေကိုငျတှေ ပြောကျသှားကွတယျ။ အလုပျအကိုငျ မရှိကွဘူး။ နောကျ လုပျလို့ကိုငျလို့လညျး အဆငျမပွဘေူး။ အစိုးရဝနျထမျးတှဆေိုရငျလညျး CDM လုပျရမှာလား။ CDM မလုပျရမှာလား။ မလုပျဘဲနဲ့ နပွေနျတော့လညျး တခါ အသကျအန်တရာယျ၊ ရနျရှာတာခံရ စသညျဖွငျ့ အမြိုးမြိုး။ ပွောခငျြတာက ဘယျအလုပျအကိုငျမှ အဆငျမပွကွေဘူးပေါ့။ ဒါကတခကျြ။ နောကျတခုက နိုငျငံခွားကုမ်ပဏီတှလေညျး ထှကျသှားကွတာတှေ ရှိတဲ့အခါကွတော့ မြှျောလငျ့ထားတဲ့ တရုတျပွညျက ကုမ်ပဏီတှလေညျး ဝငျမလာကွဘူးပေါ့။ အဲဒီလိုဆိုတော့ ဒီဟာကတော့ မှနျသငျ့သလောကျ မှနျပါတယျ။
နောကျ ပွိုပကျြသှားနိုငျတယျဆိုတဲ့ ကိစ်စကတော့ အာဏာကို ထိနျးခြုပျထားတဲ့ အဖှဲ့အစညျး - အခုကတော့ တပျမတျောပေါ့။ တပျမတျောက ပွိုကှဲသှားမလားဆိုတဲ့ပျေါ မူတညျတာပေါ့။ အခုလောလောဆယျ အနအေထားကတော့ အဲဒီလို တပျမတျောပွိုကှဲသှားနိုငျတဲ့ အနအေထားကတော့ မရှိသေးဘူး။ သူကို ဝိုငျးတိုကျနတေဲ့ အဖှဲ့အစညျးတှကေတော့ စာရငျးအရ ကွညျ့လိုကျလို့ရှိရငျတော့ အမြားကွီးပေါ့။ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့အသီးသီးက စာရှကျပျေါမှာ ကွညျ့လိုကျရငျတော့ အမြားကွီး။ လကျတှမှေ့ာတော့ အဲဒီအဖှဲ့တှအေားလုံးကလဲ စုစုစညျးစညျး ညီညီညှတျညှတျနဲ့ ဝိုငျးတိုကျနကွေတာ မဟုတျဘူး။ တခြို့လကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးတှကေ တပျမတျောနဲ့ လကျနကျကိုငျတိုကျပှဲ မဖွဈတဲ့ အဖှဲ့အစညျးတှလေညျး ရှိတယျ။ အဓိကအားဖွငျ့တော့ UWSA အဲဒီလို အဖှဲ့အစညျးတှေ၊ AA တို့လို အဖှဲ့အစညျးတှကေ အခုအခြိနျမှာဆိုရငျ တပျမတျောနဲ့ လုံးဝတိုကျပှဲ မဖွဈဘူး။ ဆိုတော့ သူ့အတှငျးပိုငျးမှာလဲ ပွိုကှဲမယျ့သတငျးကိုတော့ အခုထိတော့ မတှရေ့သေးဘူး။ အကွီးမာဆုံး အန်တရာယျကတော့ တပျမတျောထဲကပဲ လာမှာဖွဈတာပေါ့။
မေး ။ ။ ဒါပမေဲ့ ဒီနရောမှာ တခြို့တိုငျးရငျးသားတှေ၊ တိုငျးရငျးသားအငျအားစုတှကေ သူတို့တိုငျးရငျးသားတှအေနနေဲ့ သူတို့ လိုခငျြတဲ့ စဈမှနျတဲ့ ဖယျဒရယျပုံစံမြိုး မရဘူးဆိုရငျ ဆိုပွီးတော့ ဒီထကျပိုပွီးတော့ ခြဲ့ထှငျစဉျးစားလာကွတာတှေ ရှိနကွေပါတယျ။ ဆိုတော့ ဒီအခွအေနကေရော ပွညျထောငျစုကို တစုတစညျးတညျး မပွိုမကှဲအောငျ ထိနျးသိမျးထားနိုငျမယျ့ အခွအေနေ ရှိရဲ့လား။ အဲဒါကိုလဲ ဒီနရောမှာ ကနြျောတို့ ထညျ့သှငျးစဉျးစားရမယျ ထငျပါတယျ။
ဖွေ ။ ။ ဒီဟာနဲ့ ပတျသကျလို့ကတော့ အခု တိုငျးရငျးသားတှေ မြှျောလငျ့စရာက NUG, CRPH က ဦးဆောငျပွီး ဖှဲ့စညျးထားတဲ့ NUG က သူတို့ကို ဖိတျချေါတယျ၊ သူတို့နဲ့ စကားပွောပွီးတော့ အစိုးရလညျး ဖှဲ့ထားတယျ။ အဲဒီမှာ သူတို့က ဖကျဒရယျဒီမိုကရစေီ ပေးမယျလို့ ပွောတယျ။ သို့သျောလဲ အခုထကျထိ အနာဂတျအခွခေံဥပဒနေဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ တူညီတဲ့ ဆှေးနှေးခကျြတှေ ထှကျမလာသေးဘူး။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ဟိုတခါ ကနြျောတို့ ဆှေးနှေးခဲ့ကွသလိုပဲ ဖကျဒရယျစနဈကို NLD က ပေးမယျဆိုတာက ဘယျလောကျစိတျခရြသလဲ။ ဘယျလောကျ သူတို့ နားလညျသလဲဆိုတဲ့ပျေါမှာ သူတို့လညျး သံသယ ရှိကွလို့ ရှေးရခကျနတေဲ့ပုံ ပျေါပါတယျ။ တပျမတျောအနနေဲ့လဲ ဖကျဒရယျစနဈကို အခုအခါက သူတို့က လကျခံတယျ။ ဖကျဒရယျဒီမိုကရစေီနိုငျငံ သှားမယျလို့လဲ သူတို့က ပွောထားတယျ။ ဆိုတဲ့အခါကွတော့ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျ အဖှဲ့အစညျးတှအေနနေဲ့က အထူးသဖွငျ့တော့ ဟိုတနကေ့ ပွောလိုကျတာ AA ပေါ့။ ဒီလို တိုငျးရငျးသားတှေ တောငျးဆိုတဲ့ ဖကျဒရယျစနဈကို ပီပီပွငျပွငျ မရရငျ၊ ကနြျောတို့ဘာသာ ကနြျောတို့ လှတျလှတျလပျလပျ နိုငျငံခွားအကူအညီနဲ့ သှားရလိမျ့မယျလို့ သူပွောလိုကျတာ ရှိတယျ။ အဓိကပွောခငျြတဲ့ သဘောကတော့ ဖကျဒရယျစနဈ မရလို့ရှိရငျ ခှဲထှကျဆိုတဲ့ အဲဒီလိုမြိုးသဘော ပွောလိုကျတာမြိုး ရှိတယျ။ ဒါကလဲ ကနြျော ခနျ့မှနျးကွညျ့တာတော့ တကယျ ခှဲထှကျဖို့ ရညျရှယျတာ မဟုတျဘဲနဲ့ ဖိအားပေးတယျလို့ပဲ ရညျရှယျပါတယျ။ ခွိမျးခွောကျတာ၊ ဖိအားပေးတာ။ ကနြျောတို့ မွနျမာနိုငျငံရေးသမားတှေ NLD အပါအဝငျ နိုငျငံရေးသမားတှနေဲ့ တပျမတျောခေါငျးဆောငျတှကေို ဖိအားပေးပွီး၊ သတိပေးလိုကျတဲ့သဘောလို့ မွငျပါတယျ။
မေး ။ ။ ဆိုတော့ နောကျ ကနြျောမေးခငျြတာက Michelle Bachelet ပွောတဲ့အထဲမှာ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ လုံခွုံရေး၊ နောကျပွီးတော့ စီးပှားရေးတော့ ပွောပွီးပွီ။ လုံခွုံရေးနဲ့ လှတျလပျခှငျ့စတဲ့ လူ့အခှငျ့အရေး အခွအေနတှေကေော ဘယျလောကျအထိ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဖွဈနပွေီး၊ ပွနျပွီးတော့ကော အဖတျဆယျလာနိုငျတဲ့ အခွအေနေ အခုလောလောဆယျမှာ ရှိလာနိုငျပါသလား။
ဖွေ ။ ။ အခုလောလောဆယျမှာတော့ မရှိနိုငျသေးဘူး။ အခုလောလောဆယျမှာတော့ ဘယျဘကျမှ မပါဘူး။ လကျရှိ နစကကိုလညျး ပုတျခတျတိုကျခိုကျတာ၊ တျောလှနျတာ မလုပျဘူး။ NUG ကိုလညျး ပုတျခတျဝဖေနျတာ မလုပျဘူးဆိုလို့ရှိရငျ အထူးသဖွငျ့တော့ နိုငျငံရေးအရ ဘာမှသိပျမပွောဘူးဆိုလို့ရှိရငျတော့ ဒီပွဿနာ မရှိဘူး။ သို့သျော အဲဒီလို တဘကျဘကျကရပျပွီးတော့ နတေဲ့လူက ဘယျဘကျမှာပဲနနေေ သိပျတော့မလုံခွုံဘူး။ အခုမွို့ပျေါမှာ အခွအေနကေတော့။ တကယျလို့ နစကကို ပုတျခတျဝဖေနျပွီး တိုကျခိုကျနရေငျလဲ အခြိနျမရှေး လာပွီးတော့ ဖမျးသှားနိုငျတာပေါ့။ NUG, PDF တှကေို ပုတျခတျဝဖေနျပွီးတော့၊ အထူးသဖွငျ့တော့ ဆိုရှယျမီဒီယာမှာ ရေးနလေို့ရှိရငျတော့ အဲဒီလူလညျး ဘယျနခြေ့ောငျးပွီးတော့ အပဈခံရမယျဆိုတဲ့ အန်တရာယျ ရှိနတောပေါ့။ ဒါတှကေတော့ ပွောမယျဆိုရငျတော့ လူ့အခှငျ့အရေး ဆိတျသုဉျးတာပေါ့။ အဲဒီလို အနအေထားကတော့ တကယျတညျရှိနပေါတယျ။
မေး ။ ။ ဆိုတော့ စီးပှားရေး ပွောပွီးပွီ။ လုံခွုံရေး၊ လူ့အခှငျ့အရေး၊ လှတျလှတျလပျလပျ ပွောပိုငျခှငျ့ မရှိဘူး။ အကုနျကွောကျနရေတယျဆိုတဲ့ ကိစ်စ။ နောကျ ကနြျောဆကျပွီးတော့ နညျးနညျးမေးလိုကျခငျြသေးတာက စီးပှားရေးအပွငျ လူမှုရေးဆိုတာ လူတှရေဲ့ ကနျြးမာရေး၊ ပညာရေးကိစ်စတှကေိုလညျး နညျးနညျးပွောပါအုံး။
ဖွေ ။ ။ ကနျြးမာရေး၊ ပညာရေးကိစ်စတှကေလညျး အခုနပွောသလို အစိုးရက ဝနျထမျးတှပေျေါမှာ ကောငျးကောငျမထိနျးခြုပျနိုငျသေးတဲ့အခါကွတော့ CDM လုပျတဲ့ ဝနျထမျးတှလေညျး CDM လုပျကွတယျ။ ထှကျသှားကွတယျ။ နောကျတခါ ပညာရေးကိစ်စမှာလဲ ဆရာမတှကေ CDM လုပျလို့ရှိရငျလဲ သူတို့မှာ စားဝတျနရေေး အခကျအခဲ ရှိတယျ။ တခါ မလုပျပွနျလို့ရှိရငျလဲ ရနျရှာခံရတာပေါ့။ အဲဒီလိုဆိုတော့ နှဈဘကျစလုံးကို ကွောကျနရေတော့ စာသငျရတာ၊ သူတို့ တာဝနျထမျးဆောငျရတဲ့အခါမှာလဲ တထိတျတလနျ့နဲ့ သိပျပွီးတော့ စိတျရောကိုယျပါ တာဝနျမထမျးဆောငျနိုငျဘူး။ ဒါ့အပွငျ အခု ကြောငျးသားတှကေို စာမေးပှဲဖွခှေငျ့ပေးပွုတဲ့ ကိစ်စတှနေဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ အခငျြးပှား အငွငျးပှားမှုတှေ ပျေါနတေယျ။ အဲဒီလိုဖွဈနတေဲ့အခါကွတော့ ပွောခငျြတာက ကနျြးမာရေး၊ ပညာရေးကဏ်ဍတှမှော ထိခိုကျနတောပေါ့။ ကနြျောတို့ ဆေးရုံတှမှောဆိုရငျလဲ သိသလောကျတော့ ပွညျသူ့ဆေးရုံတှေ၊ အစိုးရဆေးရုံတှေ သှားလို့ရှိရငျ သိပျပွီးတော့ ဝနျဆောငျမှု မရဘူး။ အဲဒီလိုအနအေထားမြိုးတှေ ရှိနတေယျ။ ဆိုတော့ ခွုံပွောရမယျဆိုရငျတော့ အဲဒီကဏ်ဍတှမှောဆိုရငျလဲ အရငျကထကျစာရငျတော့ အမြားကွီး ဆုတျယုတျတယျလို့ ပွောနိုငျပါတယျ။
မေး ။ ။ ဆိုတော့ တိုငျးပွညျမပွိုပကျြနိုငျဘူးလို့သာ ပွောရတယျ၊ ကောငျးတာလဲ တခုမှ မရှိပါလား။
ဖွေ ။ ။ အခွအေနကေတော့ အဲဒီလို ဖွဈနတေော့ မြှျောလငျ့စရာကတော့ လာမယျ့ရှေးကောကျပှဲ - သူတို့လုပျပေးမယျဆိုတဲ့ ရှေးကောကျပှဲမှာ ပါတီကွီးတှဖွေဈတဲ့ NLD, SNLD တို့ စသညျဖွငျ့ အဲဒီလို နိုငျငံရေးပါတီကွီးတှေ ပါမလား။ ပါလာအောငျ စညျးရုံးနိုငျမလားဆိုတဲ့ပျေါမှာလဲ အမြားကွီးတညျတာပေါ့။ အဲဒီပါတီတှကေ သပိတျမှောကျနမေယျ၊ သူတို့မပါဘူးဆိုလို့ရှိရငျ အဲဒီရှေးကောကျပှဲက ထှကျပျေါလာတဲ့ အစိုးရကလညျး သိပျပွီးတော့ သွဇာရှိမယျ့ပုံ မပျေါဘူး။ နိုငျငံတကာကလဲ ဒီလိုပဲ sanction တှေ ဘာတှေ ဆကျရှိနမှောပေါ့။ အထူးသဖွငျ့တော့ အနောကျအုပျစုကပေါ့။ ပွညျတှငျးမှာတော့ သိပျပွီးတော့ ငွိမျးငွိမျးခမျြးခမျြး မရှိဘူး။ တညျငွိမျမှု မရှိလို့ရှိရငျတော့ နိုငျငံတကာ ရငျးနှီးမွုပျနှံမှုတှေ။ အထူးသဖွငျ့တော့ သူတို့အားကိုးတဲ့ တရုတျကလညျး လာဝယျစရာ၊ လုပျကိုငျစရာ မရှိဘူး။ ဆိုတော့ တဖွညျးဖွညျးခငျြးမှာ လကျနကျကိုငျ ပဋိပက်ခကို နိုငျအောငျ တိုကျနိုငျရငျတော့ အစိုးရက နိုငျအောငျတိုကျနိုငျလို့ရှိရငျတော့ အခွအေနကေ တဖွညျးဖွညျး အပွောငျးအလဲ ဖွဈသှားနိုငျတာပေါ့။
မေး ။ ။ ဆိုတော့ တိုကျနိုငျမနိုငျတာကို စောငျ့ကွညျ့ရမယျ့ အခွအေနပေေါ့။ လောလောဆယျမှာ အာဆီယံကလညျး အထူးကိုယျစားလှယျ လာပွီးတော့ မွနျမာနိုငျငံအရေးမှာ ကွားဝငျစစေ့ပျပေးဖို့ ကွိုးစားနပေါတယျ။ နောကျ ဂပြနျက ဆာဆာကာဝါကလညျး ဒီကိစ်စမှာ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမယျ ဘာညာပွောနတေယျ။ ဆိုတော့ သူတို့တှရေဲ့ အခနျးကဏ်ဍကော ဘယျလောကျ အရေးကွီးမယျ၊ ဘယျလောကျအထိ ထိရောကျမှု ရှိမယျလို့ ထငျပါသလဲ။
ဖွေ ။ ။ အခုလာတဲ့အခါကွတော့ သူတို့ ဘုံသဘောတူညီမှု (၅) ခကျြ - အဲဒါကို အကောငျအထညျဖျောဖို့အတှကျ သူတို့က အဓိကလာပွောတာ ဖွဈတယျ။ နစကဘကျကတော့ သူတို့ပွောနကွေအတိုငျး ဘာကွောငျ့ အာဏာထိနျးရသလဲဆိုတဲ့အကွောငျးကိုပဲ ပွနျရှငျးပွတယျ။ ရှငျးပွပွီးတော့ ဒီတခေါကျတော့ ထူးထူးခွားခွား ပွောတာက ဘုံသဘောတူညီခကျြ (၅) ခကျြကို သဘောတူတယျ။ ဆကျလကျအကောငျအထညျဖျောမယျ။ ဒါပမေဲ့ မွနျမာအစိုးရက ဦးဆောငျတဲ့ ဖျောဆောငျမှုပဲ ဖွဈရမယျဆိုတာမြိုး ပွောလိုကျတာကို သတိထားမိတယျ။ ဆိုလိုခငျြတာက အားလုံးနဲ့တှပွေီ့းတော့ ဒီဆှေးနှေးရေးကိစ်စတှေ ဘာတှကေ ဥပဒကွေောငျးအရ ပါဝငျခှငျ့မရှိတဲ့ သူတှကေို ပေးမပါနိုငျဘူးဆိုတဲ့ဟာကို ထပျလောငျးပွီးတော့ ပွောလိုကျတဲ့သဘော။ ဒီမှာတော့ အာဆီယံအသငျးဝငျနိုငျငံတှနေဲ့ ယူဆခကျြနဲ့ ကှာသှားပွီ။ အာဆီယံအသငျးဝငျ နိုငျငံတှကေတော့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ၊ ဦးဝငျးမွငျ့တို့ အပါအဝငျ တှဆေုံ့ညှိနှိုငျးဆှေးနှေးပွီးတော့ ငွိမျးခမျြးစှာ ဖွရှေငျးရမယျဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။ ဒီဥစ်စာကလဲ ကမ်ဘောဒီးယားက ဥက်ကဋ်ဌ ဖွဈနတေဲ့အခြိနျမှာတော့ ဒီအတိုငျး ဆကျသှားနိုငျပမေယျ့ ကမ်ဘောဒီးယား ဥက်ကဋ်ဌ မဟုတျတော့ဘဲ၊ အငျဒိုနီးရှားအလှညျ့ ရောကျသှားလို့ရှိရငျ တခါပွနျပွီးတော့ ရပျသှားပွီး၊ နဂိုမူလအတိုငျး ပွနျပွီးတော့ အခွအေနေ ပွနျဆိုးသှားနိုငျတယျ။